HomeWararka MaantaCabdiriyaad Oo Ku Baaqay In Koobkii Gobollada La Qabto
Weeraryahanka xulka gobolka Gabiley ee Cabdiriyaad Abshir Cabdi ayaa ugu baaqay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Somaliland in ay qabato tartankii ciyaaraha Gobollada Somaliland ee dib u dhacay, kaas oo qaybtiisa labaad ay isugu soo baxeen gobollada Siddeed gobol.
Wejiga labaad ee ciyaaraha Gobollada Somaliland ayaa si lama filaan ah dib ugu dhacay wakhti ay xulalka gobolladu isugu wada yimaaddeen Hargeysa, kaas oo dib u dhiciiisa ay wasaaradda ciyaaruhu ku macnaysay mid farsamo, hase yeeshee, hadal hayn aan rasmi ahayn ayaa sheegaysa in bisha January ee sannadka dambe la qaban doono.
Haddaba, Cabdiriyaad oo u warramay wargeyska Geeska Afrika oo aanu warkan ka soo xiganay ayaa u soo jeediyey Wasaarradda ciyaaraha in ay ciyaartoyga dalka u qabato tartamo, isla markaana loogu horreysiiyo ciyaaraha gobollada oo la dhamays tiro.
“Wasaaradda ciyaaraha waxa aanu uga fadhinaa inay tartamo qabato, sida muuqatana wax tartanmo ahi ma jiraan, sida cadna wasaaraddu iyadaa ka masuul ah ciyaaraaha dalka.” Sidaas ayuu yidhi Cabdiriyaad.
Arsenal Oo Dhabarka Laga Jabiyay markalena Fursad Qaali Ah Iska Lumisay
Qaadhaan Urrurinta Ololaha Ka Dhanka Ah Rodgers Iyo Lebiska Taageerayaasha Liverpool Ee Sabtida